Maqaalka Chris Donald ee Martech Zone |
Maqaallada by Chris Donald
Chris Donald waa Agaasimaha InboxGroup, Waa wakaalad suuq geyn u dirta iimayl ku takhasusay bixinta adeegyada suuqgeynta iimaylka ee natiijada keentay. Wuxuu si toos ah ula shaqeeyey shirkadaha Fortune 500, kuwa waaweyn ee tafaariiqda ah, kuwa aan macaash doonka ahayn, SMBs iyo hay'adaha dowladda dhammaan dhinacyada ay ka kooban yihiin adeegyadooda suuq geynta e-maylkooda xisaabinta iyo barnaamijyada otomatiga ee suuqgeynta muddo ku dhow 2 sano. Wuxuu ku raaxaystaa wadaagida fikradihiisa iyo aragtidiisa gaarka ah ee ku saabsan iimaylka suuq geynta hababka ugu fiican ee uu ku leeyahay bartiisa.
Habdhiska warsidaha Emailka
Isniin, April 15, 2019 Isniin, April 15, 2019 Chris Donald
Suuqgeynta iimaylku waa habka ugu fudud uguna kharashka badan ee wax ku ool ah ee lagu gaari karo dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato oo aad ku mashquuliso Waxay noqon kartaa aaladda wadista dakhliga ee ganacsigaaga ee aad raadineysay! Istaraatijiyad suuqgeynta suuqgeynta saxda ah ee meesha taal, waxaad ku guuleysan kartaa marin ballaaran oo aad u leedahay macaamiishaada jira iyo kuwa suurtagalka ah oo aad farriintaada u hor dhigto dhagaystayaal badan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka weyn ee suuqgeynta iimaylka ee ku saabsan warbaahinta bulshada